Ra’iisul wasaaraha dalka Taliyaaniga oo ku baaqay in fiinaalka tartanka Euro 2020 lagu qabto magaalada Rome… (Maxay tahay sababta uu u dalbanayo in London laga wareejiyo?) – Gool FM
Ra’iisul wasaaraha dalka Taliyaaniga oo ku baaqay in fiinaalka tartanka Euro 2020 lagu qabto magaalada Rome… (Maxay tahay sababta uu u dalbanayo in London laga wareejiyo?)
(Rome) 22 Juun 2021. Ra’iisal-wasaaraha dalka Taliyaaniga ee Mario Draghi ayaa xiriirka kubadda cagta qaaradda Yurub ee UEFA ugu baaqay in fiinaalka tartanka Euro 2020 fiinaalkiisa lagu ciyaaro magaalada Rome ee caasimadda dalka Taliyaaniga.
Magaalada London ee caasimadda Ingiriiska ayaa lagu jadwaleeyay in lagu ciyaaro kulana kama dambeysta tartanka qarammada qaaradda Yurub 11-ka bisha July ee soo aaddan, balse Ra’iisal-wasaare Draghi ayaa ku doodaya in kiisaska xanuunka Korona Fayras ee kusoo kordhaya awgeed aysan magaaladaas awoodi karin inay ciyaarta fiinaalka marti geliso.
Shan geeri oo uu xanuunkan u sabab yahay ayaa la diiwaan geliyay 28-kii maalmood ee dambeeyay, waxaana sidoo kale jira kiisaska Koofid19 oo sii kordhaya waxaana haatan tirada guud ee dadka magaalada London uu xanuunka kula dhahay ay hadda gaareyso 10,633.
Draghi oo isagoo ku sugan magaalada Berlin ee caasimadda Jarmalka la weydiiyay inay Rome mudan tahay marti gelinta fiinaalka Euro 2020 ayaa ku jawaabay: “Haa, waxaan isku dayi doonaan inaan hor istaago in fiinaalka lagu qabto dal uu caabuqa si deg deg ah ugu sii kordhayo”.
Balse si kastaba ha ahaatee, xiriirka kubadda cagta dalka Taliyaaniga ee magaciisa loo soo gaabiyo FIGC ayaa gaashaanka u daruuray in dalkoodu uu raadinayo marti gelinta fiinaalka Euro 2020 sida uu sheegay madaxweynaha xiriirka ee Gabriele Gravina.
Dhinaca kale magaalada London garoonka ku yaalla ee Wembley ayaa sidoo kale la qorsheeyay in lagu ciyaaro labada kulan ee nus-dhammaadka tartanka qarammada qaaradda Yurub.
Lionel Messi oo xalay jebiyay mid ka mid ah rikoorrada ugu waaweyn taariikhda xulka Argentina